Company Profile - Ningbo Rykay Electric Co., Ltd.
N ingbo Rykay Electric Co., Ltd. dia speacialized amin'ny famokarana fiara Mini anaty vata fampangatsiahana sy mangatsiatsiaka kokoa fotsiny any & mafana boaty, ranomandry mpanao, labiera mangatsiatsiaka kokoa fotsiny any, sns Manana traikefa maherin'ny 16 taona ao amin'io sehatra io.
W f efa nanorina matanjaka sy miara-miasa lava fifandraisana miaraka amin'ny orinasa goavana be ny raharaham-barotra ao anatin'ny ampitan-dranomasina ity. Sy ny manam-pahaizana avy hatrany rehefa avy-fanompoana fivarotana nanome noho ny mpanolo-tsaina vondrona faly ny mpividy. Detailed Info sy ny masontsivana avy ny entana dia mety ho nalefa tany aminao na inona na inona tsara ekeo. Free santionany dia mety ho voavonjy sy jereo ny orinasa ho an'ny orinasa.
O Ora orinasa tonga mba haka endrika amin'ny fampandrosoana sy ny asan'ny mpisava lalana miovaova spirits.Our RYKAY marika hihena elektrika sy ny fanafanana tarika sy ny fiara vata fampangatsiahan-zavatra nataon-tsara fitaovana, nandroso ny teknolojia, tsara tarehy famolavolana, miovaova sy azo antoka tsara, LT mandany AC / DC for fahefana famatsiana sy mora entina. Ny vokatra dia malaza namidy tamin'ny Japana. Korea Atsimo, Etazonia, Angletera, Aostralia, sns ny zavatra tsara izay azonareo tamin'ny mpanjifa.
Ny orinasa mandray mpanjifa Taloha sy Vaovao ho an'ny fandraharahana ny fiaraha-miasa.